Fihetsiketsehana ho an'ny tantsaha: mandinika ny mpiompy fa tsy mpitarika miafina ny mpitondra ataonao: Martin Vrijland
Filed in NEWS ANALYZES	by Martin Vrijland	amin'ny 16 Oktobra 2019	• 5 Comments
Vao haingana aho no nanontany raha te hanohana ny fihetsiketsehan'ny tantsaha ianao. Namaly tamina valiny fohy sy mazava aho. Mazava ho azy fa manohana ny fihetsiky ny tantsaha izahay, saingy tsy tokony hitodika any amin'ny mpanao politika isika, satria izy ireo no olana '. Ny fihetsiketsehana any Holandy dia tsy mihoatra ny voafehy tanteraka. Tsy maintsy manana fahazoan-dàlana ianao; lazao tsara amin'ny fotoana inona amin'ny fotoana inona; firy ny traktera ao amin'ny Malieveld; voahodidina fehezin'ny polisy izay eo ambany fifehezana ny sofin'izy ireo. Aza manao bebe kokoa! Ny hany zavatra miasa dia dia mifindra amin'ny fitsipika rehetra fotsiny. Saingy tsy afaka miantso an'izany ianao, satria azo sazy izany.
Noho izany dia nanoro hevitra aho fa ny omby rehetra dia mivoaka avy amin'ny fatin-tany sy ny kijana ary omby sy kisoa an-tapitrisany no mipetraka amin'ny arabe. Andao hojerentsika izay miteraka korontana!
Tsy hitranga mihitsy izany. Tsy hanao an'izany mihitsy ny tantsaha, satria very ny loharanom-bola azony izy ireo. Ary raha toa mikorontana izahay, dia io no tian'ny fanjakana. Ny firongatry ny Pegida manohitra an'i Antifa tsy nahomby tanteraka. Tsy nahomby ny famporisihana ny vahoaka teratany hanoherana ny vaovao Silamo (raha vao tsy vaovao). Tsy hahomby izany amin'ny fikomiana malaza be izao! Tsy azo nodorana aloha ny Holandey. Ka mila filoham-pirenena ve ianao? Dia misy fomba iray ihany. Mamihina ity vondrona izay mbola misy baolina ity: ny mpamboly. Manana fitaovana ilaina koa izy ireo hananganana korontana. Ary amin'ny korontana dia mamorona filaminana ianao. Izany no fanapahan-kevitra romanina taloha. Eny, ry vahoaka malala: maniry ny korontana!
Mila miverimberina hatrany ny fanjakana mba ahafahana manangana fanjakana bebe kokoa hatrany. Ka raha mila ny fahazavana maintso handrindranao fitaovana mavesatra any Holandy ianao dia mila fahavalo. Io fahavalo io dia noforonina tamim-pahakingana be loatra tamin'ny alalàn'ny hatezeran'ireo tantsaha amin'ny fangatahana tsy azo atao momba ny fanamafisana ny famoahana azota. Ka aleo lazaina fotsiny hoe: ireo tantsaha voarara noho ny fikomiana izay tsy maintsy omen'ny alibi ho fananganana tohanan'ny polisy.
Maniry ny fanjakana nametraka tafika ary manana fiara miendrika fitaovam-piadiana mahafinaritra eo sy eroa. Raha manana olona tsy dia manana fitaovam-piadiana ianao (afa-tsy ny mazava ho an'ny namorona) Mocro mafia sandoka - alibi hafa ho an'ny fanjakana polisy bebe kokoa), tsy manana antony tsara hananganana tafika mpitandro ny filaminana miaro ny elita amin'ny vahoaka ianao.
Ary nahoana ny fanjakana no maniry an'io rehetra io? Fa maninona ny governemanta te-hanangana fanjakana? Fa maninona no namorona savorovoro aloha ry zareo? Eny, izay rehetra azonao atao amin'ny polisy sy ny tafika dia voafehy ary voafehy, miantoka fa manana fifikirana amin'ny raharaha ianao raha toa ny lelafo echt mikorontana sy olona an-tapitrisany echt marary sa nandrora. Ny fananganana fanjakana polisy toy izany dia noheverina ho 'tena ilaina' tokoa. Tonga ny fotoana izay anaovan'ny vahoaka echt miaraka amin'ny lamosinao manohitra ny rindrina ary avy eo mila mila polisy (tafika) be dia be ianao (maro be) ary misy fitaovam-piadiana be dia be.
The Hague, 12 Oktobra 2018
Ny fandaharan'asa fanoloana ny fiara fitaterana kodiarana fiara (DVOW) fiarovana dia manoloana ny fanoloana ireo fiara taloha misy ny kodiarana toy ny DAF, Mercedes Benz ary Landrover, ary koa ny fehin-kevitra ho an'ny asa manokana amin'ny singa fiarovana rehetra. Amin'ny taratasy iray dia ampahafantariko anao ny momba ny fanombanana indray ny programa DVOW izay amidy fiara fanampiny. Ity fividianana ity dia tsy maintsy mamaha ny bottlenecks amin'ny fisian'ny fiara miasa ary mampitombo ny fampiatrarana ny tafika mitam-piadiana.
Azoko antoka fa marina ny 99% amin'ireo tantsaha mandray anjara amin'ity fihetsiketsehana ity. Tsy mitombina fotsiny fa tsy ho tia azy io ny olona maro. Ity horonantsary eto ambany ity dia ohatra tsy misy dikany amin'izany! Be dia be ny zavatra ifandraisako amin'ireto olona ireto. Ny fanontaniana tokana dia hoe ny mpitondra tsy tranoben'ny firenena ny fihetsiketsehana toy izany.
Amin'izany toe-javatra izany, manoro hevitra ireo tantsaha hijery ny horonantsary "Surrogates" miaraka amin'i Bruce Willis aho ary hijery hoe ahoana ny fihetsiky ny fihetsiketsehana matetika dia tarihin'ny herin'ny maizina. Izany no fitsipika taloha. Ireo izay manam-pahefana dia mahafantatra fa ny olona dia ho tia hikomy foana ary koa mampiofana am-paosin-dàlana izy ireo hamela ny fidirana ho vondrona tarika iray. Ny taom-piomanana nomanina dia afaka mialoha izany, satria ny script master (jereo ny my boky vaovao) esoratra taloha. Izany dia manome fotoana ahafahana mametraka ny tongony eo ambanin'ny vondrona matihanina sy ny mponina (amin'ny vondron'olona miafina). Noho izany dia i Vladimir Lenin (ilay mpitarika ny revolisiona Rosiana ary afaka namatsy fiaran-dalamby feno ny volamena Zionista): Ny fomba tsara indrindra hifehezana ny mpanohitra dia ny hitarika azy io!
Noho izany, mino aho fa, natao an-tsakany sy an-dàlana vaovao ny tantsaha, satria ny fanjakana dia maniry ny fikomiana voafehy hamorona alibi iray hafa mba hahafahana manangana fanjakana polisy bebe kokoa. Ny script master dia izao: korontana voalohany tany Eropa; dia avereno ny filaminana. Vakio eto izay baiko ho avy hamonjy.
Lisitry ny rohy loharano: officielebekendmakingen.nl, volkskrant.nl, volkskrant.nl
Iza ireo mpihoko jadona ady any Paris? Fihetseham-pon'ny horonan-tsary
Mandraisa ny vondrona misy anao manokana
Ny fihetsiketsehana Pegida Ny The Hague 10 April 2016 dia nanaporofo tanteraka (sary sy lahatsary)
Tags: tantsaha, fiarovana Wide, DVOW, Featured, Bet, Mampidira, tafika, Malieveld, Mali Field, miasa, miakatra, hetsi-panoherana, hetsi-panoherana, traktera, fanoloana, Fiara voatoto
16 Oktobra 2019 ao amin'ny 07: 01
Torohevitra ho an'ireo tantsaha:
Diniho raha mpikambana ao amin'ny fihetsiketsehana freemasonry ireo mpitarika ny fihetsiketsehana na, ohatra, ny klioba toa ny klioba Lions (fisintahana avy amin'ireo vondrona miafina ireo).
16 Oktobra 2019 ao amin'ny 14: 23
Trolls any Madurodam? Tsy vitan'ny hoe mamily lalana an'i Vrijland izahay?
ps: aza adino ny club Rotary 😉
16 Oktobra 2019 ao amin'ny 15: 48
hoy ny Nederlandsche Propaganda Omroep, santatry ny vaovao sandoka izany:
“Mazava ho azy fa tsy misy kitay ny tantara. Omaly dia nisy mpandraharaha sivily tamin'ny fihetsiketsehana, nefa izy ireo ihany no "hanara-maso", hoy ny mpitondra tenin'ny polisy, Steven van Santen. “Tsy hanandrana herisetra mihitsy ny polisy. Ny asan'izy ireo manokana dia ny fisorohana ny toe-draharaha tsy ho eo amin'ny tanana. "
16 Oktobra 2019 ao amin'ny 18: 08
"Ry mpahandro izao fantatsika izao fa tsy handà ny henao velively ianao"
16 Oktobra 2019 ao amin'ny 18: 38
ary io koa no fomba iray ... ordo ab chao
Protestanta: ny kabinetra dia maniry ny 'ady an-trano'
« Ruinerwold Drenthe sy ny fianakaviany, ny asa ara-tsaina manaraka (PsyOp) ho an'ny fanjakana bebe kokoa
Ny 'fianakavian'ny matoatoa' PsyOp (asa ara-tsaina): manaisotra ny fahafahanao ary mampiditra ny 'polisy polisy' »
Total visits: 13.948.566
Nahoana ianao no te hahalala an'izany? op Ny lavaka mainty nolalaovan'ny NASA dia tena plasmida misy ranona
Camera 2 op Inona ny olan'ny nitrogen, maninona no mitaraina ny tantsaha ary nahoana ny fihenan'ny hafainganam-pandeha?